Homesteads | Tsidiho i Hultsfred
Tohizo ny atiny
Kalandrie amin'ny hetsika
Hisoratra anarana hetsika
Alamino ny hetsika
trano fisotroana kafe
Jereo ny kafe rehetra
Snacks sy pizzerias
Jereo daholo ny trano fisakafoanana haingam-pandeha sy pizzerias
Jereo ny fivarotana rehetra amin'ny toeram-piompiana
Jereo ny trano fisakafoanana rehetra
Hizaha hotely rehetra
Jereo ny toby rehetra
Hizaha trano fatoriana rehetra
Jereo ny trano fandraisam-bahiny rehetra
Tsena fahagola sy parasy
Natiora & fiainana ivelany
Mihazakazaka i Toboggan
Zavakanto & asa tanana
Tontolo iainana ara-kolontsaina-ara-tantara
Tranombakoka sy fampirantiana
Valan-javaboary & fomba fijery
Miaina kolontsaina bebe kokoa!
Mahatsapa ny elatry ny tantara! Manodidina ny tanàna dia manana zaridaina sy valan-javaboahary mahafinaritra izahay. Nanao ahoana ny fiainanao taloha? Nanao ahoana ny fiainanao? Eto ianao dia afaka miaina toeram-piompiana sy tontolo iainana tamin'ny fotoana lasa izay nitantara ny tantarany tsirairay na ny valan-javaboary.
Valan-javaboary misy ny tantara ao Hultsfred
Ao amin'ny valan-javaboary tsara tarehy iray akaikin'i Lake Hulingen no misy ny valan-javaboary misy an'i Hultsfred eo an-toerana. Eo akaikin'ny varavarana Folkets, toerana fanaovana fanatanjahantena ary toby fitobiana. Taorian'ny nampidinana ny Farihy Hulingen tamin'ny 1924 dia nisy
Valan-javaboary tantara eo an-toerana Målilla-Gårdveda
Målilla Gårdveda Hembygdspark dia iray amin'ireo valan-javaboary lehibe indrindra sy be zotom-po any Suède. Ny hetsika dia atao eto mandritra ny taona ary ny zaridaina dia manitatra tsy an-kijanona miaraka amin'ny manintona vaovao. IN
Virserums Hembygdspark dia valan-javaboahary ao Virserum any amin'ny tanànan'i Hultsfred, misy trano 15 eo ho eo, nanomboka tamin'ny taonjato faha-1600 ka hatramin'ny andro maoderina. Mampiseho ny toerana misy azy ireo trano ao amin'ilay faritra
Fröreda Storegård tamin'ny taonjato faha-1700 dia iray amin'ireo tsangambaton'ny maritrano ao Kalmar County. Ny toeram-piompiana sy ny toetoetran'ny tranony izay mitazona mazava tsara ny toetran'ny tanàna tantsaha Småland tamin'ny taonjato faha-1700
Mijanona ao anaty tontolo mahafinaritra. Misy fivarotana snus, fivarotana tsena, trano fisotroana kafe sy sauna vita amin'ny rongony ary maro hafa. Lönneberga Hembygdsgille dia niorina tamin'ny 1941. Namonjy sy nikarakara ny taloha izy ireo
Hembygdsgården dia manana tontolo mahavariana miaraka amina renirano mikoriana sy dobo misy rano. Ivon-tokantrano misy vidiny lehibe ho an'i Venabygden miaraka amina trano maromaro misy lanja lehibe
Mörlunda-Tveta Hembygdsförening dia niforona tamin'ny 1963 ary tamin'ny 1965 dia naorina tao Hembygdsområdet ny trano voalohany. Ilay antsoina hoe "Turstugan" (4) izay heverina fa kely indrindra
Ny tetiandro hetsika
Momba ny tranonkala
Cookies & statistika
Ny lalàna momba ny data manokana
Tatitra momba ny fidirana
© Copyright - 2021 visithultfred.se
Rohy fandefasana pejy
Izahay ao amin'ny visithultsfred.se dia manaja ny fiainanao manokana ary manome lanja ny fifandraisanay aminao. Fantatray ihany koa fa mety manana eritreritra momba ny fiainanao manokana ianao sy ny fomba ampiasanay ny cookies. Tahaka ny maro hafa, ny tranonkalantsika dia mampiasa teknolojia hanangonana vaovao izay manampy anay hanatsara ny traikefanao ary koa ny vokatra sy serivisinay. Tsara!
Ho any an-tampony